एका बिहानै माता मनोकामना माइको दर्शन गर्दै असोज १३ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस ! भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस !
Homeराशिफलएका बिहानै माता मनोकामना माइको दर्शन गर्दै असोज १३ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस ! भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस !
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल असोज १३ गते मंगलबार इश्वी सन २०२० सेप्टेम्बर २९ तारीख अधिक आश्विन शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथी शतभिषा नक्षत्र शूल योग कौलव करण चन्द्रंमा कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा मृत्यु योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु प्रदोष व्रत विश्व हृदय दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आय आर्जनका निम्ती समय उत्तम रहेकोछ । बौधिक ब्यत्तिहरुको साथ सहयोगमा महत्वपूर्णकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । आफुभन्दा सानाको स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । वाणीका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्वन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्छ । खानपानको गडबढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ ।
आज थपिए १३५१ संक्रमित, कुन जिल्लामा कति ?
एका बिहानै माता मनोकामना माइको दर्शन गर्दै असोज १६ गते शुक्रबारको राशिफल पढ्नुहोस ! भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस !